Madaxweynaha İmamoğlu wuxuu booqday Madaarka Istanbul | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMadaxweynaha İmamoğlu wuxuu baarayey garoonka diyaaradaha Istanbul
20 / 11 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
imamoglu waxaa laga helay dib u eegista garoonka diyaaradaha istanbul
Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu wuxuu indha indheyn ku sameeyay gegada diyaaradaha ee Istanbul. Imamoglu, oo isagu la soo shaqeeyey maaraynta 'IGA', ayaa yidhi: "Waxaan rabnaa inaanu maamulno geedi socod leh xiriir heerkiisu sareeyo oo ay la leeyihiin machad walba oo ku yaal Istanbul, urur kasta oo bixiya adeegyo".
Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) Madaxweynaha Ekrem Imamoglu, Airport-ka Istanbul, ayaa sameeyay baaritaano. IGA (Gegada Diyaaradaha ee Istanbul) Maareynta Duulista Inc. Imamoglu, oo ka helay xarunta xarunta xog-hayaha guud iyo maamulaha guud Hüseyin Kadri Samsunlu, waxaa sidoo kale ku wehelinaayey maamulka sare ee IMM. Baadhitaannada ka dib, saraakiisha İGA waxay u bandhigeen wakiilka IMM. Imamoglu iyo Samsunlu, kulanka kadib wuxuu socday ku dhawaad ​​saacaddo 2 ah oo laga soo gudbay kaamirooyinka hortiisa. İmamoğlu wuxuu ku qiimeeyay kulanka ereyadan:
“Nuxurka Waxyaabaha La Isugu Yeelo Nolosha ISTANBUL FUDUD”
“Gegada diyaaradaha ee ugu weyn Istanbul. socda si uu u noqdo garoonka diyaaradaha ee ugu weyn dunida iyo Turkey. Sidaa darteed, maaddaama aan nahay maamulka IMM, waxaan leenahay xiriir isuduwid iyo isgaarsiin aad isugu dhow. Waxaan horay u go'aansanay inaan ila kulmo qaab tanıma Sidee wax uga qaban karnaa tanıma si aan isbarano oo aan wax walba uga sahlanaato. Maanta waxaan helnay saacad raaxo leh oo ah 2. Dhammaan qodobbada waan soo taxnay. Waxaan abaabulay kulan wax soo saar leh oo ku saabsan sida garoonka diyaaradaha, oo qayb ka ah Istanbul, loo fududeyn karo, filashooyinka annaga iyo filashooyinka garoonka. Dhamaan arrimahan, wadaxaajoodyada si loo fududeeyo nolosha dadka deggan Istanbul. Dabcan, waxaan yeelan doonnaa kulankan Sabiha Gökçen. Waxaan dooneynaa inaan maamulno nidaam leh xiriirka ugu sarreeya xiriirka aan la leennahay machad walba oo ku yaal Istanbul, urur kasta oo bixiya adeegyo. Taasi waa sababta aan maanta u joognay. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Gegada Diyaaradaha Magaalada Istanbul iyo Maamulka Hayada 'IGA oo nagu soo dhoweeyay dhamaan asxaabtooda fulinta.'
"WAA KU JOOJINAYAA ADEEGYADA JAALAD adag"
Imamoglu, ayaa isaga loo jiheeyay, durum Xaalad ay qusayso shaqaalaha iyo rakaabka. Ma jiraan wax horumar ah oo laga sameeyay khadadka hawada iyo Khadadka IETT? tus diyaarinta jiilaalka aagga ku wareegsan, qaar ka mid ah rajada laga qabo marinnada waddooyinka iyo qaar ka mid ah talo soo jeedinta lagu yareynayo aaladaha tuujinta saaxiibbadeen. Waxay isu keenayaan waxaas oo dhan oo ay wada hadlaan. Haddii loo baahdo, shaqada iyo nolosha; Waxaan horumarin doonaa tayada nolosha dadka waxaanan ku horumarin doonnaa adeegyada si go'an
SAMSUNLU: UK WAAN KA QARSANNAANNAA INAAD OGA SAMEEYSAAN XIRIIRA 2 WAA INUU USOO SAARO ”
Samsunlu waxa kale oo ay tidhi, “Aad ayaan ugu faraxsanahay in maanta lagu soo dhoweeyo Madaarkayaga. Waxaan si faahfaahsan u sharaxnay nafteena. Mashruucan waxa aragti ah ee Istanbul, Turkey waxa ay ka qayb qaateen in ay dhexdhexaad ah iyo waqti dheer in aan fursad u heli lahaa in ay wadaagaan noogu muuqato on our u gaar ah. IMM waa danteena ugu muhiimsan. Gaadiidkayaga dadweynaha ee hadda jira waxaa bixiya Havaist, İETT iyo İBB. Marka laga soo tago tan, waxaan sidoo kale la shaqeyna hay'addo badan oo ay ka mid yihiin İGDAŞ, İSKİ iyo Belbim. Intaas ka dib waan sii wadaynaa shaqada. Waxaan sidoo kale haynaa talo bixinno ka socota IMM, si aan kor ugu qaadno hawlgalladayada iyo nashaadaadyada halkan. Waxaan aad ugu faraxsanahay in Madaxweynaheenu ina siiyay saacadda 2 maanta. Wuxuu si xiiso leh noo dhageystay. Anaga ahaan, waxaa jiray talo bixinno qaarkood. Waxaan ka fikirnaa mar labaad tan. Waxaan jeclaan lahaa inaan mar labaad uga mahadceliyo halkaan uu joogo ”.
Duqa Magaalada İmamoğlu: 'Haydarpaşa iyo Sirkeci Stations Stations'